‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स’ को फाईनलमा झापाकी रोशा र कृपा - Kanchan Post
प्रकाशित समय: १२:३२:२४
दमक : नेपालको चर्चित रियालिटि सो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प्स’ को फाईनलमा झापाकी दुई चेली पुग्न सफल भएका छन् ।
झापाका १४ वर्षीय प्रतियोगीद्वय कृपा पौडेल र रोशा फुयाँल सारेगमपको उपाधि नजिक पुगेका हुन् ।
प्रतियोगितामा लगातार धमाका मच्चाइरहेका झापाली चेली रोशा फुयाल र कृपा पौडेल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्न सफल भएका हुन् । रोशा मेचीनगर र कृपा विर्तामोड निवासी हुन् ।
हरेक शुक्रबार र शनिबार बेलुका ९ बजे ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन र डोको युट्युब च्यानलबाट प्रसारण भइरहेको सारेगमपमा विभिन्न अडिसनमा देश तथा विदेशबाट ३५ हजार पाँच सयभन्दा बढी बाल प्रतियोगी सहभागी भएका थिए । जसमा उनीहरुलाई उछिन्दै रोशा र कृपा टप ५ हुदै उपाधि नजिक पुगेका हुन् ।
अब उपाधिका लागि फुयल र पौडेलसंगै पर्वतका अरुण सुनार, भारत सिलिगुडीका आदित्य विश्वकर्मा र भक्तपुरकी अविज्ञा घिमिरेले आगामी माघ २२ गते प्रतिष्पर्धा गर्ने छन् । उनीहरुलाई जिताउन दर्शक श्रोताले सोहि समयसम्म भोट गर्न सक्ने छन् ।
को हुन रोशा ?
रोशाको अनुभव भने प्रेरणा र कृपाको भन्दा केही लामो छ । उनले औपचारिक रूपमा सङ्गीत सिक्न थालेको आठ–नौ वर्ष भयो । चार वर्षको उमेरबाट सङ्गीत सिक्न थालेकी उनले पनि श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध बनाउने क्रम जारी नै राखेकी छन् ।
उनका दाजु रोशन हुन्, रोशाको पहिलो गुरु । सङ्गीतमा रोशनकै हात समातेर अगाडि बढेकी रोशाले दाजुसँगै हार्मोनियम चलाउन सिकिन् । दाइ पनि सङ्गीत क्षेत्रमा लागिपरेका छन् । उनकै बाटोमा अगाडि बढ्नेक्रममा छिन्, रोशा पनि । सङ्गीतमै केही गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेकी उनलाई सारेगमपले साथ दिइरहेको छ ।
‘सारेगमपले उसको सपनालाई साकार गर्ने काम गरिरहेको छ’, रोशाकी आमा कला बाँस्कोटा भन्छिन्, ‘दाइले सिकाएको हो । दाइले सिक्दै गर्दा उसलाई राग र हार्मोनियम सिकाउँथ्यो । उसले डोहो¥याउँदै गर्दा सारेगमपसँग रोशाको भेट भएको हो । एक दिन गायिका बन्छु भनेर सपना सुनाइरहन्थी । सायद यहीबाटै पूरा हुन्छ ।’
मेचीनगर नगरपालिका–८ स्थायी घर भएकी उनी हाल बिर्तामोड–५ बस्छिन् । स्थानीय देवी माविमा कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने उनले बिर्तामोडकै सनलाइट म्युजिक स्कुलमा सङ्गीत सिकिरहेकी छन् । अहिले उनी अरू प्रतियोगीजस्तै सारेगमपमा सहभागी छिमेकी मुलुक भारत र स्वदेशका प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन् ।
रोशालाई भोट गर्न मोबाइल मार्फत मेसेज बक्समा गएर SGMP टाइप गरी एक स्पेस छोडेर १३ टाइप गरी ३३००१ मा सेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै अनलाईन भोटिङका लागि MOMO भोटिङ एप डाउनलोड गरी भोट गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी momoappnepal.com बाट पनि भोट गर्न सकिन्छ ।
को हुन् कृपा ?
बिर्तामोड नगरपालिका–३ रामचोक घर भएकी कृपा हाल कक्षा ९ मा अध्ययनरत छिन् । स्थानीय मनमाया माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कृपा सानैदेखि गुनगुनाउँथिन् । सङ्गीत सिक्न थालेको भने लामो समय भएको छैन । बिर्तामोडस्थित ‘सप्तक द इन्स्टिच्युट अफ पर्फमिङ आर्ट्स’मा विगत चार महिनादेखि सङ्गीत सिक्न थालेकी हुन् । त्यसअघि केही समय सरगम सङ्गीतालयमा म्युजिक सिकिन् ।
उनको परिवारमा अरू कोही गायन विधामा छैनन् । तर उनलाई भने सङ्गीत क्षेत्रमा ठुलो रुचि छ । उनले यसअघि कुनै गायन रियालिटी सोमा सहभागिता जनाएकी छैनन् । तर पनि निरन्तरको साधनाले उनलाई एक कुशल गायिका बन्नतिर डोहोर्‍याउँदै छ । ‘परिवारमा अरू कोही सङ्गीत क्षेत्रमा छैनन् तर सानैदेखि उसले यो क्षेत्र मन पराएकी छ’, आमा अनिता पौडेल भन्छिन्, ‘छोरीको रुचि मात्र नभए सपनै एउटा गायिका बन्ने छ । यसलाई साकार बनाउन सारेगमपले साथ दिइरहेको छ ।’
विद्यालयका केही साङ्गीतिक कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिएर श्रोतालाई मन्त्रमुग्ध बनाउन सफल कृपा प्रदेशस्तरीय गायन प्रतियोगिताकी उपविजेता भइसकेकी छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पुरस्कार थापेकी कृपाले झन् आफूलाई दृढ बनाएर यस क्षेत्रमा समर्पित गरिन् । सङ्गीत क्षेत्रमा आफूलाई निखार बनाउन उनले शिव ताण्डव स्तोत्र गाएर युट्युबमामा हालेकी छन् ।
त्यस्तैगरी कृपालाई भोट गर्न गर्न मोबाइल मार्फत मेसेज बक्समा गएर SGMP टाइप गरी एक स्पेस छोडेर ०९ टाइप गरी ३३००१ मा सेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै अनलाईन भोटिङका लागि MOMO भोटिङ एप डाउनलोड गरी भोट गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी momoappnepal.com बाट पनि भोट गर्न सकिन्छ ।